Ihe ị ga-ahụ na obodo León | Akụkọ Njem
La isi obodo Castilla y León na-enye anyị ọtụtụ ihe anyị ga-ahụ maka mgbapụ. Ọ bụ obodo nwere obodo ochie mara mma nke na-agwa anyị gbasara akụkọ ihe mere eme niile, na mgbakwunye na ịnwe katidral ya ama. Ọ bụ obodo toro kemgbe ọtụtụ narị afọ n'ihi na ọ bụ ebe nkwukọrịta na mgbago ugwu. Site na ịrị elu nke Camino de Santiago, ọ ghọwokwa ebe ndị njem nleta na-anabata ọtụtụ narị ndị ọbịa kwa afọ.
Anyị ga ahụ ihe bụ isi ihe nke nleta n'obodo León. Obodo nke puru iche maka obodo ochie ya kamakwa maka gastronomy ya na ikuku ya. Ọ bụ ezigbo ebe maka izu ụka izu ụka dị mfe, ebe enwere ike ịga ya ngwa ngwa na ụbọchị abụọ.
1 Katidral Leon
2 Guzmanes Obí
3 Lọ Booties
4 Ebe obibi nke San Marcos
5 Collegiate Church nke San Isidoro
6 Na MUSAC
8 Mmiri mmiri
Katidral nke León, nke a makwaara dị ka Bella Leonesa bụ otu n'ime ihe ncheta kachasị mkpa. Soro Camino de Santiago ma kwupụta ya dị ka Ncheta Mba na 1844, ịbụ onye mbụ na mba ahụ. E wuru ya na narị afọ nke XNUMX na n'elu ebe ịsa ahụ ndị Rom n'ụdị mara mma nke French Gothic. Styledị a na-egosi silhouettes ndị a na-ewu ewu na-enyere aka ibutu mgbidi ahụ ka e wee nwee ike itinye windo ndị ahụ mara mma na windo windo ndị buru ibu na Spain. Akụkụ ikpeazụ bụ nke ịdị nfe, ọbụlagodi n'ime katidral, ebe nnukwu agba dị na windo iko ndị a tụrụ.
El Palacio de los Guzmanes dị nso na Casa Botines, na-eme ka ọ dị mfe ileta ha abụọ. Nke a Renaissance obí malitere na narị afọ nke XNUMX na e wuru site na otu n'ime ihe ndị kasị mkpa ezinụlọ na obodo. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ ebe oche kansụl mpaghara. Ọ dị na Plaza San Marcelo na n'ime ị nwere ike ịhụ patio ochie ochie mara mma nke nwere olulu mmiri n'etiti.
Thislọ a bụ otu n’ime ụlọ ole na ole ọrụ Gaudí rụrụ na mpụga Catalonia. Ọ bụ nnukwu ụlọ Neo-Gothic nwere mmetụ ọgbara ọhụrụ. O nwere ike isiri anyị ike ịmata ya dịka ụlọ Gaudí, ebe ọ dị mfe karịa ọrụ ya ndị ọzọ. Ewubere ya iji debe isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ textile mana taa eji ya maka Caja de España na León.
Ebe obibi nke San Marcos
Ebe obibi ndị nọn a bụ otu n'ime Ihe owuwu ihe owuwu Leonese yana katidral. Ọ bụ ụlọ mara mma nke emere na mbụ dị ka ụlọ ọgwụ maka ndị njem ala nsọ mana emesịa bụrụ ebe obibi ndị nọn na ọbụna ụlọ mkpọrọ ebe Quevedo nọrọ. Ugbu a ọ bụ ụlọ mbikọ ise maka ndị chọrọ ịnọ na ya. Ọ bụ na narị afọ nke XNUMX mgbe ọrụ ụlọ a malitere, na-akwatu ụlọ ọgwụ gara aga nke nọ n'ọnọdụ adịghị mma. Taa ọ bụ otu n'ime ihe ncheta kachasị mkpa nke Spanish Renaissance.
Collegiate Church nke San Isidoro
Originallylọ akwụkwọ ndị a na-eme kọleji bụ ebe obibi ndị mọnk a raara nye San Pelayo. Taa ọ bụ basilica nke narị afọ nke iri na otu n'ụdị ndị Romanesque nke dị n'akụkụ foduru nke mgbidi ochie. Inside na collegiate ụka ị nwere ike ịga dị iche iche ebe. Na Pantheon nke ndi eze bu ebe e liri ndi eze n'oge emepechabeghị. The crypt bụ a mara mma nke ukwuu na vaults mma na frescoes na-akọ dị iche iche Mpaghara. Na collegiate ụka anyị nwekwara ike ịhụ ndị kasị ochie Romanesque cloister na Spain. Ebe ndị ọzọ anyị nwere ike ịhụ na ụka a bụ kọleji Renaissance, akụ nke ndị eze ma ọ bụ ụlọ chalice na chalice nke Doña Urraca.
Y’oburu na ichota nka kariri igha agha ya Ngosi ihe omuma nke ihe omuma nke Castilla y León. Ihu ihu ya ga-adọta uche gị ọ bụrụgodi na ị maghị ihe ọ bụ, ebe ọ nwere ogwe agba niile. Ọnụ ụzọ ahụ adịghị ọnụ ma anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọgbara ọhụrụ na ụlọ nke pụrụ iche. Mgbe ihe ncheta oge ochie dị na León, ọ bụ mgbanwe nkà anyị nwere ike ịmasị.
La Plaza Mayor bụ ebe etiti nke g’eme ka anyi zuru ike. Enwere ụlọ mmanya, ikuku na mbara ala, ebe ọ bụ na ọ dị n'akụkụ Barrio Húmedo a ma ama. N'ebe a, anyị nwere ike ịhụ ụlọ ochie ma haveụọ mmanya mgbe anyị zuru ike site na nleta obodo. Ebe kachasị mma iji nwee ọ touchụ ochie nke obodo ahụ mgbe ị na-achọ tapas.
Ebe ị nwere ike nwee obi ụtọ nke gastronomy nke LeónMaka ụfọdụ ihe ọ drinksụ refụ na-enye ume ọhụrụ na tapas na ikuku kachasị mma bụ Barrio Húmedo, ọ bụ ezie na anyị ga-ekwukwa Barrio Romántico. Omenala na-agwa anyị na ị ga-enwerịrị mmanya na obere uwe mwụda na-atọ ụfọdụ n'ime tapas dị iche iche ha na-enye anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » León » Ihe ị ga-ahụ na León